Colaada Jamaahirta PSG Ee Neymar Jr Lagu Soo Dhawayn Doono, Zinedine Zidane Vs Keylor Navas Iyo Waxyaabaha Xiisaha Badan Ee Paris Todobaadkan Ka Dhici Doona. - Gool24.Net
Colaada Jamaahirta PSG Ee Neymar Jr Lagu Soo Dhawayn Doono, Zinedine Zidane Vs Keylor Navas Iyo Waxyaabaha Xiisaha Badan Ee Paris Todobaadkan Ka Dhici Doona.
Neymar Jr ayaa markii ugu horaysay xili ciyaareedkan waxaa la filayaa in lagu soo dari doono liiska kooxdiisa PSG kadib khilaafkii waynaa ee uu maamulka kooxdiisa la soo galay iyo waliba heshiiskii fashilmay ee uu Barcelona ku doonayay.
PSG waxay sabtida la ciyaari doontaa kooxda Strasbourg waxaana la filayaa in Neymar Jr uu ciyaari doono kulankiisii ugu horeeyay xili ciyaareedkan ee kooxdiisa PSG laakiin waxaa sugaysa soo dhawayn cadaawad leh.
Taageerayaasha mayalka adag ee kooxda PSG ayaa hore ugu oriyay isla markaana ugu qayliyay Neymar Jr dhamaadkii xili ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana la filayaa in soo dhawayn cadaawad leh uu kala kulmi doono taageerayaasha kooxdiisa PSG.
Waxa kale xiiso badan yeelan doona in Keylor Navas uu markii ugu horaysay bilaaban doono waayihiisa ciyaareed ee kooxdiisa cusub ee PSG, isaga oo waliba fursad deg deg ah u heli doona in uu kaga hor yimaado Zinedine Zidane oo qorshihiisa ka saaray.
Jamaahiirta kooxda PSG waxaa aad uga cadhaysiinaya in Neymar Jr uu si cad u doonayay in uu kooxdooda ka baxo oo uu waliba Barcelona ku laabto, waxa kale oo dareenkooda sii xumeeyay in kulankiisii abid ugu fiicnaa uu ku tilmaamay kulankii uu Barcelona ku hogaamiyay guushii 6-1 ka ahayd ee ay PSG ku gumaadeen.
Kadib kulanka sabtida ee ay PSG la ciyaari doonto kooxda Strasbourg, waxay kooxda reer France isku diyaarin doontaa kulanka arbacada ay Paris ku soo dhawayn doonaan Real Madrid, waana kulan xamaasad badan ku yeela arimo badan.
Neymar Jr oo si wayn xagaagan ay Real Madrid u doonaysay ayaa ka hor iman doona koox lala xidhiidhinayay oo uu iska diiday in uu ku biiro, waxa kale oo kulankan la filayaa in uu saamayn badan yeelan doono Keylor Navas oo saddex Champions League oo xidhiidh ah kula soo guulaystay Madrid.
Inkasta oo uu Zidane hore u aaminsanaa Keylor Navas, haddana ugu danbayn waxa uu ka doortay Courtois iyada oo loo ogolaaday in Navas uu ku biiray PSG oo uu hadda kaga hor iman doono Zidane iyo kooxdiisa Madrid.
Sidaa daraadeed, waxaa la sugayaa dhacdooyinka xiisaha badan ee todobaadkan ka dhici doona Paris, nooca soo dhawaynta uu Neymar Jr ka heli doono taageerayaasha ugu cadhaysan in uu kooxdooda ixtiraam daro kula kacay iyo waliba saamaynta uu Navas yeelan doono.